Bill Gates na Napoleon Dynamite | Martech Zone
Ọ dị mma ịhụ na Microsoft nwere ụdị ọchị!
Tags: ọnụ ụzọ ụgwọnapoleon dynamite
Julaị 23, 2006, elekere 11:33 nke ehihie
Ha ha, nke ahụ bụ vidiyo na-atọ ọchị! Anụrụ m na Gates mere Napoleon Dynamite spoof, mana ahụtụbeghị m ya (ma e wezụga maka ihe ndị ọzọ) tupu taa. O meela ọtụtụ ihe dị otú a n'ime afọ ndị gafeworonụ, n'ihi ya, o doro anya na ọ na-enwe mmetụta ọchị!
Jul 25, 2006 na 3: 12 AM
Ebee ka emere ihe nkiri ahụ? Obi dị m ụtọ ịhụ Bill Gates nwere ihe ọchị n'ime ya.